Fibreglass awayeyabula - China Wuqiang County Huili Fibreglass
Yokusonga Screen Window
PVC Ukwaleka Fibreglass ntambo
Fibreglass bacanda eStrand mat
Ipholiyesta Window Screen
window yokhuseleko screen
Thina ngokubanzi benikela uluhlu nanto lweDirect ehanjiswayo. Le ehanjiswayo ezinikezelwa kuthi weaved ngabasebenzi bethu ambalwa, ngubani uqinisekise ukuba oku xa par noshishino wabeka nemigangatho. Le ehanjiswayo banikela ifumaneka iinkcukacha ezahlukahlukeneyo. Ukongeza koku, abaxumi bethu bexabisekile onokungenelwa le ukuphengulula kuthi ngayo iinkcukacha ezahlukeneyo ngamaxabiso afikelelekayo kakhulu.
uluhlu lwethu iimveliso ezikumgangatho ophezulu iquka ingqokelela kuphela Fibre ehanjiswayo. Le ehanjiswayo kufundiswa zezi weaved ziingcali zethu abanezakhono usebenzisa arcade izinto umgangatho ukuba iinkonzo kubathengisi abaninzi abagunyazisiweyo shishino. Kwakhona, ezi zinto zidalelwe kwi par kunye noshishino nezithethe zobulunga kwaye zenziwe zifumaneke ngokobungakanani obahlukeneyo amazinga kakhulu enengqondo.
Iimveliso ezilungele zonke iintlobo zu wenqanawa. Iimveliso yoqobo ezingu, itanki yamanzi, izahlulo imoto, izixhobo zokwakha, bakurholela nesempilweni, itanki yokugcina njalo njalo. roll nganye ngqo ehanjiswayo ebhalwe shrinkage inwebu okanye ukuzoba inwebu, ngoko ibekwe kwibhokisi yekhadibhodi okanye kwi pallet. pallet ngalinye linga ziphakishe imiqulu 48 okanye 64. ubunzima roll ngalinye 15-18kg. Oku sikwazi ukwandisa ubunzima uluhlu ngokweemfuno zabathengi. Pallet inqwaba ungabi maleko ngaphezulu kwe-2, ibhokisi yekhadibhodi ungabi ngaphezulu kwe maleko-5.
ixesha Post: Apr-28-2018